Mazano ekunyatso sarudza kukosha | Ehupfumi Zvemari
Kusarudzwa kwemusika wekutengesa kunoenderana kazhinji mune zano rinofanirwa kutsanangurwa zvisati zvaitika nzvimbo dzakavhurika mumisika yemari. Chichava chinhu chakakosha kwazvo kana iwe usiri kuda kuve nerimwe dambudziko nemari yakaiswa mari nekuti zvichange zvakajairika kuti vakaremara vaiswe mumabasa ako. Kana iwe usiri kuda kuenda kuburikidza nemamiriro ezvinhu akadaro usingadiwe nevadiki nevepakati varimimari hauzove nesarudzo kunze kwekushandisa akateedzana matipi ayo pasina mubvunzo achave anoshanda kwazvo paunenge uchigadzirira mashandiro ako mumari.
Ehezve, kune mamwe ma parameter aunofanira kuzviseta iwe panguva yaunosarudza yakanakisa pamusika wemasheya kuti iite capital inowanikwa iwe yeiri yerudzi rwekuita inobatsira. Hatisi kuzotsvaga akawanda, asi ese akakosha kukwidziridza yega yega mashandiro pamusika wemasheya. Hazvishamise kuti zvinokubatsira kuti uzvidzivirire kubva kumafambiro ane njodzi zvakanyanya kuzvido zvako. Iko iyo technical chinhu zvimwechetezvo, kunyangwe pasina kukanganwa kuongorora kwakakosha.
Mukati meichi chiitiko chakazara, isu ticha funga kubva ikozvino pane mashoma ma parameter maunofanira kutarisa huwandu kuti usarudze kukosha. Iwe uchanyatso kugadzirisa mashandiro ako mumisika yemari. With kufamba kwakachengeteka uye izvo zvinokupa iwe neunyanzvi hwekuita yako zvinangwa nekukasira uye izvo hazvisi zvimwe kunze kwekunge uine yakakwira mwero mune yako correine account kana uchigadzirisa zvinzvimbo. Semuenzaniso, iwo atinokufumura pazasi:
1 Sarudza kukosha: munzira ipi?
2 Keys: kuhaya vhoriyamu
3 Nhoroondo dzekare
4 Chikamu chine kukosha kwacho
5 Masoko emusika wemasheya
6 Bullish mafomu mumatanda
Sarudza kukosha: munzira ipi?
Chinhu chekutanga chekuita zano iri chinoitwa nekuongorora maitiro ari kuitwa nemari yemari panguva iyoyo. Neiyi nzira, iwe uchazoziva nekuchengetedzeka kukuru kana iri nguva yekupinda munzvimbo dzako kana kana, nekusiyana, zviri nani kumirira kuti uwane mukana webhizinesi wawanga wakamirira kwenguva yakareba. Iri zano rakapusa kushandisa uye mumaminetsi mashoma iwe uchaziva uine chokwadi chikuru kana kukosha kuri mune downtrend, bullish kana pamwe lateral maitiro. Sezvo iwe uchizonyatso ziva, iri mune yechipiri yavo mauri iwe uine yakanakisa mikana yekuita yako kuchengetedza kunobatsira.
Izvi zvinodaro nekuti iyo mutengi kuyerera iri kuzvimanikidza neyakareruka pamutengesi. Iwe une mukana mushoma wekukanganisa uye nekudaro inzvimbo yakanyanya kutengwa mukutenga mumisika yemari. Aya marudzi enguva haana nguva yakatarwa asi, zvinopesana, anogona kutora mwedzi mishoma kana kuenderera nekusingaperi pasi pemakore mazhinji panokwira. Kunyangwe paine chokwadi chekuti kumwe kucheka mumitengo yavo kunogona kugadzirwa iyo inofanirwa kushandiswa kusimudzira kudyara pamutengo unokwikwidza kupfuura pakutanga. Usakanganwe kana iwe uchida kubudirira kupedzisa yega yega mashandiro pamusika wekutengesa.
Keys: kuhaya vhoriyamu
Iyi imwe paramende mumusika wemasheya ndiyo imwe yesarudzo dzakanyanya kusarudza sarudzo yemusika wemasheya. Kwete zvisina maturo patinenge tichitaura nezvehuwandu hwekutengesa ndizvo zvinoreva huwandu hwechengetedzo dzakatengeswa kune mugove mune yakapihwa nguva. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti iyo volume inoratidza kufarira kwevatengesi kune chimwe chiitiko. Nekuti zvirizvo, kana paine huwandu hwakawanda hwechibvumirano iri kutaura kuti pane kufarira kukuru kune vanoita mari kuti vatenge zvikamu zvako. Icho chiri nyore uye ichi chakakosha uye chakakodzera musika wemusika paramende haina zvakavanzika zvikuru. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvakanyanya maererano neiyo vhoriyamu yekuhaya ndiyo ine chekuita nezvekukosha kwekambani yakanyorwa. Ndokunge, iwe uchaona izvo equity zvitema machipisi, senge Santander, Inditex kana Endesa ndivo vanorema zvakanyanya muindekisi sezvo vaine capitalisation yakakwira. Nepo pane izvo zvinopesana, kuchengetedzeka ine yakaderera kwazvo yekutengesa vhoriyamu kunogona kuumba inopfuura rimwe dambudziko mukudyara. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti iwe unenge uine mamwe matambudziko pane anodikanwa ekupinda nekubuda munzvimbo dzawo, zvirinani nemutengo waunoda.
Uye iwe haufanire kukanganwa izvo trajectory yeakaongororwa emusika wemari kukosha kwave kuri. Iwe unozogona kuziva kuti ndeupi wayo wepamusoro uye wepasi mutengo kuti uone iri kumagumo nzira iyo iyo yainogona kutora mumisika yequity. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuenda kune iyo yakakosha tebhu kuti uwane zviri nyore idzi data rakakosha kuti riongorore rakaringana mari iyo iwe yaunoda kuisimbisa kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamisi kuti iwe unowana zvinopfuura kamwe kushamisika kana uchiita iri zano rekudyara. Kunyanya kana ichiperekedzwa neyakawongorora ongororo yeiyo mamiriro ari kupfuura izvozvi.
Kune rimwe divi, usakahadzika chero nguva kuti iyo nhoroondo mitengo ivo vanopfuura zvinopfuura chidimbu cheruzivo nezve ake apfuura. Iyo inogona kukupa iwe isinganzwisisike pfungwa nezvekuti iyo stock ingazvibata sei pamwedzi mishoma inotevera kana kunyangwe makore. Naizvozvo, usambozvidza kuzvipira kuti uzive nezve izvo zvaitika imari yemari inoongororwa newe. Uye zvakare, iyo inogona zvakare kukupa iwe imwe chiratidzo nezve maitiro mune iyo yakanyorwa kambani kunyudzwa. Unogona kunyange kuwana kushamisika kusinganzwisisike kwausina iwe pakutanga.
Chikamu chine kukosha kwacho
Inogona kunge iri paramende yakakosha, asi isina kukosha pane yapfuura yatakafumura muchinyorwa chino. Iwo misika yemasheya ndiyo inopa ruzivo rwakanyanya pamusoro pekuti ino midziyo yemari ingazvibata sei mune ramangwana, hongu, kwete kure zvakanyanya. Semuenzaniso, kana isu tikatarisa zvikamu zvidiki zveSpanish stock stock, tinogona kuona kuti ndezvipi zvine mutsigo uye ndezvii zviri bearish. Zviri firita yakakosha kushambadzira yako investments zvinoenderana neprofile iwe yaunounza panguva iyoyo sediki uye wepakati investor. Ndokunge, kana iwe uine hasha, zvine mwero kana uri pane imwe nzvimbo pakati.
Kune rimwe divi, iyo Sector kune iyo kukosha kwemusika wemasheya inogona kukupa iwo madhairekitori echiito kutsanangura iyo nguva yekushanda. Kana izvo zvakafanana, kana zvichizoitika ipfupi, yepakati kana yakareba nekuti pachiitiko chimwe nechimwe iwe uchazoda chikamu chakasiyana zvichienderana nehunhu hwayo. Iyi imwe yeakareruka uye akapusa maitiro aunogona kushandisa kubva panguva ino chaiyo. Nekuti hazvizodi ruzivo rwakawandisa mumisika yezvemari kusiyana nematanho akambotaurwa.
Masoko emusika wemasheya
Ivo pasina kupokana zano rakanakisa rekutanga investimenti nekubudirira kukuru kupfuura nakare. Mupfungwa iyi, haufanire kukanganwa kuti kune zvakawanda uye zvakasiyana zvakasikwa uye kuti iwe unozogona kusarudza zvichienderana nemaitiro mazhinji ayo ongororo yavo inosanganisira. Kunge bendekete-musoro-bendekete, ndiwo manhamba e kaviri uye katatu siringi / pasi. Ndichiri kune rimwe divi, zvakakoshawo kwazvo kuti uzive kuti iyo mienzaniso yechinyakare machati machati anodzokororwa kakawanda munguva. Kune akawanda sezvaungafungidzira kubva pakutanga.
Kune rimwe divi, ayo anonyanya kushandiswa nevashambadzi vadiki nepakati nepakati ndeaya anopa zviratidzo zvekuchinja, maitiro emusika wemasheya: manhamba emusika wemasheya, bendekete repafudzi, mativi matatu kana manhamba kumashure, pakati pevamwe zvakakosha kuti ivo vari mukati mekuongororwa kwehunyanzvi.
Bullish mafomu mumatanda
Imwe yeaya ari mumusoro weumwe neumwe anozviremekedza investor ndiye anonzi as kukwira katatu. Iyo inongogadzirwa neiyo yakatwasuka yekupikisa tambo uye inosimudzira nhungamiro; mutengo urikuita kuwedzera kuwanda mukati mekatatu. Kukosha kwayo kunobva mukuti aya marudzi eatatu anowanzo kuputswa kumusoro kumusoro kazhinji.
Kufanana neizvi, kune akawanda anogona kushandiswa kutanga mashandiro mumisika yemari. Kunyangwe muchiitiko ichi, dambudziko rako hombe riri muchokwadi chekuti kudzidza kwakawanda kunodiwa mune iyi mhando yehunyanzvi kuongorora. Uye zvinogona kunge usina iwe pachako, mune iyo kesi unenge usina imwe sarudzo asi kutanga mune ino ongororo system kuti ukwanise kuona mamwe eaya manhamba ayo iwe aunogona kuita kuti mari ibatsirwe neakakura anovimbisa ebudiriro pane kuburikidza nedzimwe nzira mukudyara.
Iyi sisitimu iri mukati meizvo chaizvo zviri chati kuongorora chinova chikamu chekuongororwa kwehunyanzvi icho chinoongorora kufamba kwemitengo Iwo manhamba anoumba mitengo yezvakachengetedzwa zvakachengetedzwa uye izvo zvinodzokororwa neimwe frequency zvinomutsa izvo zvinozivikanwa se chartism. Iyo nzira kune iyo yakanaka chikamu chezviito zvevashambadziri nevamiriri vezvemari yakabatana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mazano ekunyatso sarudza kukosha